Hoobal shaaciyey inuu Museveni kula tartami doono madaxtinimada dalka - BBC News Somali
Hoobal shaaciyey inuu Museveni kula tartami doono madaxtinimada dalka
Xildhibaan mucaarad ah oo ka tirsan baarlamanka Uganda hoobal na ah oo la yidhaa Bobi Wine ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu u tartami doono madaxtinimada dalkaas marka la gaadho doorashada dhici doonta sannadka 20121-ka.
Ninkan oo 37 jir ah ayaa la tartami doona Madaxweyne Yoweri Museveni oo talada dalkaa hayey muddo 33 sannadood ah.
Heesaagaas oo isku sheega "madaxweynaha dan yarta" ayaa aad u dhaliilay Musaveni.
Waxa sannadkii hore lagu oogay eed ah khiyaamo qaran sababtana waxa lagu sheegay inuu [horseed ka ahaa] dad shiiday kolonyo madaxweynaha sidday.
Hase yeeshee wuu beeniyey eeddaa waxaana lagu sii daayey damaanad.
"Aniga oo ka wakiil ah shacabka Uganda ayaan kugu la tartamayaa [Museveni-yoow] doorasho xor ah oo xalaal ah 2021-ka" ayuu Bobi Wine ka yidhi madal uu ka hadlayey oo uu kaga shaacinayey musharaxnimadiisa caasimadda Kampala.
"Waan ogsoonahay halista aan u badheedhayo ee ah inaan la tartamo Museveni laakiin sababta aan ku dhiirranayaa waa shacabka Uganda ee aan ahay hogaamiyaha ay doonayaan" ayuu ku yidhi wakaaladda wararka ee AFP.
Heesaagan oo magaciisa dhabta ahi yahay Robert Kyagulanyi ayaa haatan muddo laba sano ah ahaa xildhibaan baarlamanka ka tirsan.
Wuxuu isku dhigaa inuu yahay qof u hadla saboolka waxaanu ka heesaa caddaaladda iyo dimuqraadiyadda.
Baarlamanka Uganda ayaa ansixiyey wax ka bedel dastuuri ah oo meesha ka saaray xaddidaada da' da oo ahayd in aan musharaxiinta madaxtinimadu ka weynaan 75 sano jir.
Talaabadaasi waxay dhabbaha u bannaysay in xisbiga talada hayaa Museveni oo ah 74 jir u magacaabo musharax mar lixaad qabta talada dalka.
Taageerayaashiisuna waxay sheegaan in ay tahay inuu talada sii hayo si uu u suurto geliyo xasiloonida dalka iyo horumarka dhaqaale.